न्युजिल्याण्ड कोरोना संक्रमण मुक्त, कसरी भयो कोरोना भाईरसको नियन्त्रण? | पहिलो बोली
न्युजिल्याण्ड कोरोना संक्रमण मुक्त, कसरी भयो कोरोना भाईरसको नियन्त्रण?
४६१५ पटक पढिएको
२६ जेठ, काठमाडौं:
विश्वभर अहिले कोरोना भाईरसको संकमणको महामारी फैलिएको छ । विभिन्न देशमा अहिले पनि दैनिक हजारौंको संख्यामा मानिसमा कोरोना भाईरसको संक्रमण भईरहेको छ । यस्तो बेलामा न्युजिल्याण्डमा भने कोरोना संक्रमण भएका सबै जनाले कोरोना संक्रमण जित्न सफल भएर संख्या शुन्यमा झरेको छ ।
बीबीसी तथा अलजजिरा लगायतका सञ्चारमाध्यमका अनुसार न्युजिल्याण्डमा आइसेलेसनमा भएका अन्तिम बिरामीलाई पनि आइसोलेसनबाट निकालिएको छ । न्युजिल्याण्डमा पछिल्लो ४८ घण्टादेखि कुनै पनि लक्षण नदेखिएपछि अन्तिम बिरामीलाई पनि आइसोलेसनबाट निकालिएको हो । न्युजिल्याण्डका स्वास्थ्य महानिर्देशक डाक्टर अस्ले ब्लूमफिल्डले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्युजिल्याण्डको लागि यो निकै खुसीको खबर रहेको बताएका छन् । उनले देश कोरोना संक्रमण मुक्त हुनुले खुसी ल्याएको बताएका छन् ।
गत मे २२ तारिख देखि न्युजिल्याण्डमा अहिलेसम्म कुनै पनि नयाँ कोरोना संक्रमित संक्रमित फेला परेका छैनन् । हालसम्म न्युजिल्याण्डमा कोरोना संक्रमितको संख्या एक हजार ५०४ जना थियो । कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको उनीहरु मध्ये २२ जनाको मृत्यु भएको थियो । कोरोना संक्रमणको सुरुवाती चरणमा नै न्युजिल्याण्डले देशमा कडा रणनिती अपनायो । कोरोना भाइरसका संक्रमित संख्या ३० पुग्दा मार्च १९ मा कडा लकडाउनको घोषणा गरेको थियो । पाँच सातासम्म न्युजिल्याण्डमा लकडाउन कडाइको साथमा पालना गराइएको छ । त्यसपछि भने नयाँ संक्रमित नदेखिएसँगै विस्तारै लकडाउनलाई खुकुलो बनाइएको थियो ।
गत अप्रिल महिनाको अन्त्यमा न्युजिल्याण्डमा कोरोना संक्रमितको संख्या लगभग शुन्य प्राय भएको थियो । संक्रमितको संख्यामा गिरावट आएपछि त्यहाँको सरकारले लकडाउनलाई हटाएको थियो ।
न्युजिल्याण्डमा कोरोना भाइरसको संक्रमण शून्यमा झरेको भए सिमा भने नखुल्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री ज्यासिन्डा अर्डनले अहिले नै तत्काल सीमानाका नखोलिने बताएकी छिन् । अन्य सबै खालका प्रतिबन्दमा भने रोक लगाईएको छैन । सम्पूर्ण कुराहरुलाई खुला गरिएको छ ।